Kugadzira mimhanzi nyowani nehungwaru hwekunyepedzera. Emulator.online ▷ 🥇
Artificial intelligence, ikozvino, inopfuura kuyedza uye iri kunyatsobata muzvirongwa zvakawanda uye zvinoshandiswa. Pakati peizvi, izvo zvekugadzira mimhanzi zviri kuchinja zvakanyanya, zvekuti kunyangwe avo vasina ruzivo rwezviridzwa zvemimhanzi kana ruzivo rwekuimba vanogona kutandara nekuburitsa kufunga kwavo. Artificial intelligence yakashandiswa kumimhanzi inoshanda kuburikidza nealgorithm iyo, nekuongorora huwandu hukuru hwezvinyorwa, inokwanisa kugadzira otomatiki mimhanzi nyowani uye yakasarudzika. Iyo algorithm inosanganisa zvidimbu zvemitinhimira yakaumbwa nezvishwe, nemitsara yakasiyana yechiridzwa chega chega chemimhanzi
Kune akati wandei mashandisirwo ewebhu ayo aungaedza nawo kugadzira mimhanzi uchishandisa njere dzekunyepera iyo inogona kuzoshandiswa pakuteerera kana sepamberi pevhidhiyo, mutambo wevhidhiyo kana chero chimwe chirongwa. Mimwe mienzaniso yekushandisa iyo yekugadzira mimhanzi mitsva kuburikidza neAI inowanikwa, mahara, pane anotevera masaiti.
VERENGA ZVIMWE: Masites ekuridza online uye kugadzira mimhanzi uye zvinowirirana
1) Kugadzira.fm Ndicho kumashure mumhanzi jenareta, yakanaka kushandisa kuzorora uye kutarisa, inogara nekusingaperi. Mimhanzi pane ino saiti haina kunyorwa nemumwe munhu, asi inogadzirwa otomatiki uye haiperi.
2) Mubert Icho chirongwa chinoshanduka, icho iwe chaunogona kuyedza mune demo vhezheni. Sarudza iyo chinguva (yakakwira maminetsi makumi maviri nepfumbamwe) uye mhando yemimhanzi (Ambient, Hip-Hop, Magetsi, Imba nevamwe) kana mafungiro (zvinosuruvarisa, zvinofadza, zvinonetesa, zvakasununguka, nezvimwewo), ipapo unogona kugadzira rwiyo ruchave rutsva nguva dzese, dzaunogona kuteerera mukutenderera uye kuti unogona zvakare kurodha pasi $ 1 kuti ugone kurishandisa muzvirongwa zvako wega usinganetseke nezve marezinesi uye kodzero Kubva kumunyori. . Mubert anogona kunyora mimhanzi yemagetsi munguva chaiyo inoenderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega, kuitira kuti vanhu vaviri vasatombofanira kuteerera kuchinhu chimwe chete.
3) Aiva.ai saiti iwe yaunogona kushandisa mahara gadzira mimhanzi nyowani. Paunenge uchigadzira account, unogona kutsanangura mamwe ma parameter senge genre, kureba, zviridzwa, nguva, uye zvimwe kuti ugadzire wega mimhanzi nyowani inogona kutererwa online kana kunyangwe kurodha pasi. Aiva.ai chirongwa chepamhepo chakazara, unofanirwa kuzviedza. Aiva zvakare ine bar bar yekushandisa mimhanzi, kuigadzirisa sezvaunoda, wedzera mhedzisiro uye mitsara mitsva yezviridzwa. Chikamu chemupepeti chinogona kuve chakaomarara kana iwe usina ruzivo.
4) Soundraw.io ndeimwe yemahara saiti yekugadzira mimhanzi nyowani uchishandisa njere dzekunyepera Nekugadzira iyo yemahara account, iwe unogona kubva wasarudza iyo genre, manzwiro, zviridzwa, nguva, nguva, uye wozoteerera kumatambo akagadzirwa.
5) Ampermusic ndeimwe saiti yekugadzira mimhanzi ine simba, pamwe iyo inobvumidza iwe kuti uwedzere kuwanda mukusarudzwa kwehunhu hunofanirwa kuve nehunhu hutsva. Pano iwe unogona zvakare kuwana chishandiso nekugadzira iyo yemahara account. Paunogadzira chirongwa chitsva chekunyora, haugone chete kutsanangudza rudzi, asi zvakare kuratidza mhando yemhando pakati peavo vakarongedzerwa wobva wasarudza mhando yekutamba, tambo zviridzwa, nezvimwe. Nziyo itsva.
BONUS: Kuti upedze chinyorwa, zvakakodzera kuzivisa nezve inonakidza saiti. Google Blog Opera, iyo inoita mavara mana akasiyana-siyana achiimba, rimwe nerimwe riine izwi reTatar opera, rimwe nerimwe riine toni yakasiyana (bass, tenor, mezzo-soprano uye soprano). Manzwi akanyorwa nevaimbi vane hunyanzvi uye anogona kugadziridzwa zvakasiyana nekufambisa nzvimbo dzakasiyana, achivakwevera kumusoro nekudzika kuruboshwe uye kurudyi. Nekufamba kwenguva, unogona kugadzira mimhanzi yepati yeKisimusi, iyo mhando yaunoimba muchechi, kubva pakutanga uye kurekodha kuti ugovane. Uchishandisa iyo yeKisimusi switch unogona kuteerera kune dzimwe dzinozivikanwa nziyo dzeKisimusi dzinoimbwa nemablobs. Iyo yekunyepedzera njere modhi inoshandisa manzwi akawanikwa nevaimbi kuita kuti mabhubhu arove akakodzera manotsi uye vagadzire iwo chaiwo manzwi ekugadzira rwiyo runofadza uye rwemafaro, zvichivaita kuti vaimbewo.
VERENGA ZVIMWE: 30 maapplication ekuridza nekuita mimhanzi pane Android, iPhone uye iPad
Gadzirira rakapotsa bato neshamwari kana mhuri muboka vhidhiyo kufona